ကြည့်ရှုသူတိုင်း အရမ်းအသဲယားသွားအောင် ချစ်စရာအမူအရာလေးတွေ နဲ့ Tik Tokဆော့ပြလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခန့်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး – Online News Post
ကြည့်ရှုသူတိုင်း အရမ်းအသဲယားသွားအောင် ချစ်စရာအမူအရာလေးတွေ နဲ့ Tik Tokဆော့ပြလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခန့်ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုလေး
ဗီဒီ ယို လေး ထဲမှာ တော့ ခန့် က အလန်း စား ဖက်ရှင် ဝတ်စုံ လေး ဝတ်ပြီး သီချင်း လေး ရဲ့ တီးလုံး လေး အတိုင်း အသည်း ယား စရာ ကောင်း အောင် ဆော့ ကစားထား တာ ဖြစ် ပါ တယ် … . ဒါ့ အပြင် သူမ ဝတ်ဆင် ထား တဲ့ ဖက်ရှင် လေး နဲ့ ဘိုဆန် တဲ့ ဆံပင် လေးက လည်း လိုက် ဖက်ပြီး ချစ် စရာ ကောင်းလောက် ပါ တယ် … ။ ပရိသတ် ကြီးရေ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ အမူ အရာလေး တွေနဲ့ ဆော့ကစား ထားတဲ့ ခန့်ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယို လေး ကို ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေး လိုက် ပါ တယ် … .
သွယ်လျ ကျစ်လျစ် တဲ့ သေးသေး သွယ်သွယ် ခန္ဓာ ကိုယ် လေး အပြင် ဆွဲဆောင် မှု ရှိတဲ့ အပြုံး လေးတွေ နဲ့ ယောကျာ်း လေး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ အ သည်း တွေကို ဖမ်းစား ထား နိုင် ခဲ့တဲ့ သူက တော့ မင်းသမီး ချောလေး ခန့်ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … ။ ခန့် ဟာ MRTV –4ရုပ်သံ ဇာတ် လမ်းတွဲ ထဲမှာ ပါဝင် သရုပ် ဆောင် ရင်း ပရိ သတ် တွေ ရဲ့ အား ပေး ချစ်ခင် မှု တွေကို အပြည့် အဝ ရရှိ ထားတာ ဖြစ်ပါ တယ် .. ။ လက်ရှိ မှာ တော့ သူမ ဟာ အကောင်း ဆုံး ကြိုးစား မှု တွေ ကြောင့် အနု ပညာ လော က မှာ အချိန်အတို တွင်း ရပ်တည် နိုင်ခဲ့ ပြီလည်း ဖြစ် ပါ တယ် … ။
ခန့် ဟာ မြန်မာ ဆန် ဆန် ဖက် ရှင် ဝတ်စုံ လေး တွေ နဲ့လည်း လိုက်ဖက်မှု ရှိ သလို ခေတ်ပေါ် ဖက်ရှင် လေးတွေ နဲ့ လည်း ချစ်စရာ ကောင်း အောင် ဝတ်ဆင် တတ်တာကို တွေ့ ရ ပါ တယ် … . ဒါ့ အပြင် ခန့် က တော့ နေ့စဉ် ဆို သလို Tik Tok ဗီဒီယိုလေး တွေ အပြင် သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေကို လည်း ပရိသတ် တွေ အ တွက် အမြဲဖော် ပြ ပေး လေ့ ရှိ ပါ တယ် … ။ ယခု တစ်ခါမှာ လည်း ခန့်က မြင်သူတိုင်း ငေးမော သွား လောက် မယ့် ရင်ခုန် စရာ ကောင်း တဲ့ Tik Tok ဗီဒီယို လေးတွေ ကို တင် ပေး လာ ခဲ့ ပါ တယ် နော် … .
ဗီဒီ ယို ေလး ထဲမွာ ေတာ့ ခန႔္ က အလန္း စား ဖက္ရွင္ ဝတ္စုံ ေလး ဝတ္ၿပီး သီခ်င္း ေလး ရဲ့ တီးလုံး ေလး အတိုင္း အသည္း ယား စရာ ေကာင္း ေအာင္ ေဆာ့ ကစားထား တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ … . ဒါ့ အျပင္ သူမ ဝတ္ဆင္ ထား တဲ့ ဖက္ရွင္ ေလး နဲ႔ ဘိုဆန္ တဲ့ ဆံပင္ ေလးက လည္း လိုက္ ဖက္ၿပီး ခ်စ္ စရာ ေကာင္းေလာက္ ပါ တယ္ … ။ ပရိသတ္ ႀကီးေရ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိတဲ့ အမူ အရာေလး ေတြနဲ႔ ေဆာ့ကစား ထားတဲ့ ခန႔္ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယို ေလး ကို ျပန္လည္ ေဖာ္ၿပ ေပး လိုက္ ပါ တယ္ … .
သြယ္လ် က်စ္လ်စ္ တဲ့ ေသးေသး သြယ္သြယ္ ခႏၶာ ကိုယ္ ေလး အျပင္ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိတဲ့ အျပဳံး ေလးေတြ နဲ႔ ေယာက်ာ္း ေလး ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ အ သည္း ေတြကို ဖမ္းစား ထား နိုင္ ခဲ့တဲ့ သူက ေတာ့ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ခန႔္ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။ ခန႔္ ဟာ MRTV –4႐ုပ္သံ ဇာတ္ လမ္းတြဲ ထဲမွာ ပါဝင္ သ႐ုပ္ ေဆာင္ ရင္း ပရိ သတ္ ေတြ ရဲ့ အား ေပး ခ်စ္ခင္ မႈ ေတြကို အျပည့္ အဝ ရရွိ ထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္ .. ။ လက္ရွိ မွာ ေတာ့ သူမ ဟာ အေကာင္း ဆုံး ႀကိဳးစား မႈ ေတြ ေၾကာင့္ အႏု ပညာ ေလာ က မွာ အခ်ိန္အတို တြင္း ရပ္တည္ နိုင္ခဲ့ ၿပီလည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ … ။
ခန႔္ ဟာ ျမန္မာ ဆန္ ဆန္ ဖက္ ရွင္ ဝတ္စုံ ေလး ေတြ နဲ႔လည္း လိုက္ဖက္မႈ ရွိ သလို ေခတ္ေပၚ ဖက္ရွင္ ေလးေတြ နဲ႔ လည္း ခ်စ္စရာ ေကာင္း ေအာင္ ဝတ္ဆင္ တတ္တာကို ေတြ႕ ရ ပါ တယ္ … . ဒါ့ အျပင္ ခန႔္ က ေတာ့ ေန႔စဥ္ ဆို သလို Tik Tok ဗီဒီယိုေလး ေတြ အျပင္ သူမရဲ့ ပုံရိပ္ေလး ေတြကို လည္း ပရိသတ္ ေတြ အ တြက္ အျမဲေဖာ္ ၿပ ေပး ေလ့ ရွိ ပါ တယ္ … ။ ယခု တစ္ခါမွာ လည္း ခန႔္က ျမင္သူတိုင္း ေငးေမာ သြား ေလာက္ မယ့္ ရင္ခုန္ စရာ ေကာင္း တဲ့ Tik Tok ဗီဒီယို ေလးေတြ ကို တင္ ေပး လာ ခဲ့ ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post ပုရိသတို့ရဲ့ ရင်ခုန်နှုန်းတွေ ကို ဝုန်းဒိုင်းကြဲသွားအောင် ဆက်ဆီကျကျ ပုံလေးတွေ ကို ချပြလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဂန္တဝင်
Next post အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးရှေ့မှာ လူထုနဲ့အတူ တက်တက်ကြွကြွပါဝင် ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ခင်လှိုင်